သင် အသက် ၃၀ ရောက်ရင် ဒါတွေ ဆက်မလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်…. – Nyi Ma Lay
သင် အသက် ၃၀ ရောက်ရင် ဒါတွေ ဆက်မလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်….
By Nyi Ma LayPosted on April 28, 2021
လူ တစ်ယောက် ရဲ့ ဘဝမှာ ပြောင်းလဲမှု အများဆုံး အရွယ်ဟာ အသက် ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ဟာ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုခုမှာ အခြေမြဲနေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်သလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရလည်း လူကြီး တစ်ယောက်အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ပြည့်သွားတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်ဟာ အခုပြောမယ့် အချက်တွေ ဆက်မလုပ်သင့်တော့ ပါဘူး။
(၁) ကိုယ် ယုံကြည်တာအတွက် ရင်မဆိုင်တာ
ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ်သိပ် လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို မိဘကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ တစ်ခြား အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်စေ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝပုံစံကို စပြီး အကောင်အထည်ဖော် သင့်ပါတယ်။ ဒီအချိန်က စပြီး ကိုယ်လုပ်သမျှဟာ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ် လက္ခဏာအဖြစ် လူတွေက သတ်မှတ် သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံနဲ့ EverybodyFights လက်ဝှေ့ကလပ် တည်ထောင်သူ ဂျော့ချ်ဖိုးမန်း ၃ ရဲ့ စကားရှိပါတယ်။ “ကိုယ် ယုံကြည်ထားတဲ့ အရာအတွက် တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်ခြင်းဟာ လက်လျှော့အရှုံးပေးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ” တဲ့။
(၂) ကိုယ့် Type မဟုတ်တဲ့ သူကို ဆက်ချစ်နေမိတာ
ကိုယ်ချစ်မိတဲ့ သူက ကိုယ့်ဘဝ အတွက် အံမဝင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အသက် ၃၀ က စပြီး ချန်ထားခဲ့ပါတော့။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကြောင့် အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ အသက် ၃၀ မှာ ကြားလို့ မကောင်းတဲ့ အရာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအချိန်က စပြီး မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ လူနေမှုပုံစံကို ပြောင်းရတော့မှာပါ။
(၃) ကျန်းမာရေး ကို အရင်လိုပဲ ဂရုမစိုက်ဘဲ နေမိတာ
“အသက်သွေးခဲ အမြဲမရှိ” ဆိုတဲ့ စကား ရှိပါတယ်။ အခု မာချာနေပေမယ့် ကျန်းမာအောင် မနေရင် မကြာခင် တဲအိုပျက်ကြီး လေတိုက်သလို ယိမ်းယိုင်ပြိုလဲ သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရှိပါစေ။ အသောက်အစားနဲ့ အပျော်အပါးတွေ လျှော့ ၊ အားကစား လုပ်ပြီး ကျန်းမာရေး လိုက်စားပါ။ အသက်ကြီး လာလေလေ ကျန်းမာခြင်းဟာ သိပ်ကို အရသာရှိမှန်း သိလာလေလေ ဖြစ်မှာပါ။
(၄) အောင်မြင်ဖို့ အသက်ငယ်သေးတယ်လို့ ထင်နေတာ
ချမ်းသာဖို့ ၊ အောင်မြင် ကျော်ကြားဖို့ ကိုယ့်အသက်က ငယ်သေးတယ်လို့များ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝကို အသက် ၁၀၀ နဲ့ တွက်ပြီး ရှေ့မှာ အဝေးကြီး ရှိသေးတာပဲလို့ မယုံမှတ် လိုက်ပါနဲ့။ အခုချိန်မှာ အောင်မြင်မှု မရသေးရင် ဒါမှမဟုတ် အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်မလာသေးရင် အတော်ကြီး နောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
(၅) ဘဝမှာ ပေါ့ပေါ့တန်တန် နေနေတာ
ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘဝက တန်ဖိုးကြီး ပါတယ်။ ထိုက်တန်အောင် နေထိုင်ပါ။ ဘဝမှာ ကိုယ့်နာမည် ဂုဏ်သတင်းကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက် မွှေးပျံ့အောင် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကိုယ်နေထိုင်ရာ လောကကြီးအတွက် အဖိုးတန် လူသားတစ်ယောက် ၊ ဘဝကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှင်သန်နေထိုင်သွားသူတစ်ယောက်အဖြစ် စိတ်ချကျေနပ်အောင် နေပါ။ ပေါ့တီးပေါ့တန် နေပြီး တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ အချိန်နဲ့ စွမ်းအင်တွေ မဖြုန်းတီးလိုက်ပါနဲ့။
Previous post ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ချက် (သို့) ပညာရှင်များ အဖြေရှာ၍မရနိုင်သော အံ့ဖွယ် အီစတာကျွန်း
Next post ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်က ဝန်ထမ်း အများဆုံး ကုမ္ပဏီကြီး ၅ ခု